Rakitra miafina – Mpaminany breziliana – JucelinoLuz
Rakitra miafina – Mpaminany breziliana
Águas de Lindoia, 18 Oktobra 2021
9, horohoro 11 – Tsunami atsimo atsimo atsinanana – fahasimban’ny Katrina, sns. Voalaza mialoha
Misy psychic breziliana iray izay manana nofinofy izay manambara mialoha ny ho avy ary mampahafantatra amin’ilay olona na governemanta mifandraika amin’ny vaovao marina momba ny ho avy azo tao anaty nofy, ary nahazo valiny mihitsy aza. Nolazainy mialoha ny fanafihana mpampihorohoro ny New York Trade Center Building tamin’ny 11 septambra 2001, ary hitazona fa nandefa taratasy tany amin’ny filoha Bush (dadan’ny filoha Bush ankehitriny) izy tamin’ny 26 oktobra 1989, miaraka amin’ny valiny.
Jucelino Nobrega da Luz, ilay anarana lava, dia nanoratra taratasy tany amin’i Al Gore avy any Etazonia tamin’ny 15 Mey 1988. Naminany mialoha izy fa “hihombo ny fandravana ny tontolo iainana maneran-tany, miaraka amin’ireo tafio-drivotra sy tsunami mamely an’i Indonezia sy Etazonia, horohoron-tany tany Sumatra tamin’ny 2004, ary nandrava ny faritra atsimon’i Etazonia ny Rivo-doza Katrina tamin’ny 2005 ‘.
Jucelino dia nanoratra boky iray momba ny fiarovana ny tontolo iainana, An Inconvenient Truth, ary naminany 20 taona lasa izay fa homena ny loka Nobel fandriampahalemana i Gore amin’ity taona ity noho ny fandraisany anjara tamin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha mandresy ny loka Nobel fandriam-pahalemana amin’ity taona ity- 2007 i Gore, dia hataony gaga indray izao tontolo izao ho toy ny mpaminany tweezers manerantany. Tonga mpampianatra oniversite izy tamin’ny faha-47 taonany, ary hatramin’ny fahazazany dia nanomboka naminany izy, nahita fahitana tamin’ny ho avy tao amin’ny nofinofiny. Ny faminaniana mazava sy marina ihany no ampidiriny, ary ampahafantariny mialoha ilay olona mialoha ary hahazo valiny izy, ka izy no mitandrina ny fahamarinan’io faminaniana io ihany.
Tamin’ny fotoana nitrangan’ny fanafihan’ny mpampihorohoro tamin’ny 9/11 tany New York dia naminavina ny fanafihan’ny Etazonia an’i Irak izy noho io fanafihan’ny mpampihorohoro io izay nandefa taratasy tany amin’ny gazety ‘Miami Herald’ ary nanome ny antsipirian’ny fialokalofana Hussein. Na izany aza, nanaitra be ilay izy fa tsy navoaka tao amin’ny gazety hisorohana ny fikorontanana eo amin’ireo Amerikanina. Nilaza i Giucerino fa tara izy vao nahazo taratasy fifonana avy amin’ny talen’ny famoahana ny gazety.
Mikasika ny fahasimbana nateraky ny horohoron-tany Sumatra sy tsunami dia nisy loza nampandrenesina tamin’ny filohan’ny Maldives tamin’ny taona 1997. Raha ny marina, tamin’ny faran’ny taona 2004 dia nisy horohoron-tany lehibe sy tsunami mahery vaika izay nahatratra 8,9 ny tany Azia atsimo. Tamin’ny 2003 dia naminavina ny hiharatsy ny toe-pahasalaman’ny Papa John Paul II izy ary nanonofy manokana fa narary ny Papa tamin’ny 1 Febroary 2005 ary naiditra hopitaly. Ny Papa dia nodimandry tamin’ny 2 aprily tamin’io taona io.
Voalaza fa nandefa taratasy tany amin’ny lapam-panjakana Imperial Japoney izy tamin’ny 1979 momba ny Horohorontany Great Hanshin sy ny Raharaha Aum Shinrikyo any Japon.
Ny manatsara ny maha-marina sy ny fahatokisana ny nofinofisany mialoha dia ny tsy firaharahiany ny andraikitra hanamafisana fa rehefa avy nanonofy mialoha izy dia mandefa taratasy any amin’ny firenena na olona mifandraika izy mba hisarika ny saina sy handray valiny.
Ity mpaminany ity dia manana fahaizana mamatsy angovo lavitra ary iray amin’ireo voalohany nampitandrina ireo manampahefana manerantany momba ny fiovan’ny toetrandro lehibe hiarovana ny zanak’olombelona sy ny tontolo iainana (biodiversité).
Lahatsoratra avy amin’ny gazety, magazine, radio ary fahitalavitra maro momba ny Oracle.
Ity ambany ity ny rohy iray hamakiana boky mahaliana momba ity mpaminany ity.